Abavelisi bePhepha le-Acrylic kunye nababoneleli - iChina Acrylic Sheet Factory
I-acrylic Plexiglass iyafumaneka kwi-Sika-to-Ubungakanani beSpredishithi, iiSpredishithi ezipheleleyo, okanye iiSayizi eziSisiseko esiSiseko. Iphepha le-Plexiglass liglasi, uphawu, ukuthimla kogada, iwindow okanye izinto zokubonisa ezomeleleyo, ezinganyangekiyo ukufuma kwaye zicace gca kuneglasi. I-Plexiglass nayo inokwenziwa ngobushushu ngaphandle kokulahleka kokucaca kokukhanya. La maxwebhu e-acrylic anezoqoqosho, anokuchaphazeleka kwaye anokuchaneka ngokuchanekileyo ukuya kubungakanani. Ukuba ufuna i-plexiglass, sukundwendwela iDepho yaseKhaya okanye iLowes, tsalela umnxeba kwi “Professional”. Siza kusika ubungakanani size sithumele amaphepha eplexiglass ngqo emnyango wakho.
Iishiti zePlexiglass ziza kuluhlu olubanzi lobungakanani kunye nobukhulu. Iimpawu zecwecwe le-acrylic zibandakanya: Ukuzinza, ukucaca, umgangatho ongaguquguqukiyo, ukwenza izinto ngokungafaniyo, ukumelana nemozulu, ukukhanya kunye nokukhuseleka, ukumelana ne-UV, ukumelana neMichiza kunye nokusebenza okubalaseleyo. Amashiti e-acrylic anokuhambisa ukukhanya okugqwesileyo-kucacile kuneglasi! Ayizukujika ityheli emva kokuvezwa lilanga ixesha elide.
Ukukhangela iplexiglass enganyangekiyo
Ukukhangela i-plexiglass enganyangekiyo kubhekisa kwi-plexiglass enobunzima obuphezulu bomhlaba, ukumelana nokukrwela. Iimpawu ezibonakalayo, iipropathi zoomatshini, kunye nokumelana nemozulu ziphantse zafana ne-plexiglass yesiqhelo. Ubunzima bomphezulu buphezulu, ukuxhathisa ekuqaleni, ukumelana nokukrwela, kunye nokumelana neekhemikhali.
1.Ukucaca ngokugqibeleleyo kunye nokuhanjiswa kokukhanya kunye ne-93%.
2. Ukugquma ngombane okugqwesileyo, ukukhanya kakhulu kubunzima.
3. Iiplastikhi ephezulu, Ukuqhubekeka nokubumba kulula.
4.Ukuqina kobungqongqo kunye nemozulu elungileyo yokumelana nepropathi
5. Intle ngebala, kulula ukuyicoca
Izinto zokuthengisa ezi-2: imiqondiso yelogo yentengiso, imiqondiso, iibhokisi ezikhanyayo, imiqondiso, imiqondiso, njl
Izinto zokwakha ezi-3: umthunzi welanga, ibhodi yokugquma isandi (isandi sepleyiti yesandi), umnquba, i-aquarium, i-aquarium, i-sheeting sheeting yangaphakathi, ihotele kunye nokuhonjiswa kwendawo yokuhlala, ukukhanya, njl.
4.Kwezinye iindawo: izixhobo ze-elektroniki, iiphaneli zombane, ukukhanya kwebhakana, izibane zemisila yemoto kunye neefestile zemoto ezahlukeneyo, imisebenzi yezandla, ukukrola, ibhodi yemiqondiso kunye nezinto zokudlala njl.
Cacisa i-Acrylic Sheet yi-ACRYLIC, eyaziwa njenge "plexiglass sheet ephathwe ngokukodwa". Uyinto yamachiza. Igama leekhemikhali ngu "PMMA", elilelokuphantsi kwepropylene yotywala. Kwishishini lesicelo, izinto ze-acrylic ezingafunekiyo ngokubanzi zibonakala ngokwimo yamasuntswana, iipleyiti, imibhobho, njl.
iphepha elibonakalayo elicacileyo le-acrylic